အောင်မြင်သူတွေ လိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ အလေ့အကျင့် (၇) ခု - MyWorld
အောင်မြင်သူတွေ လိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ အလေ့အကျင့် (၇) ခု
Posted on 5/08/2016 by May Soe Lwin
​(Zaw Gyi Version)
ဒီတိုင်းထိုင်နေရုံနဲ့တော့ အလုပ်ခွင်မှာအောင်မြင်တဲ့လူဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး.. ထီပေါက်ချင်တယ်ဆိုရင် အနည်းဆုံးတော့ ထီထိုးရမှာပေါ့နော်.... ကောင်းမွန်တဲ့အလေ့အကျင့်လေးတွေက Professional ဆန်ဆန်အောင်မြင်မှုရရှိလာအာင်ပံ့ပိုးပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ လက်ခံပါသလား? လက်ခံတယ်ဆိုရင် လုပ်ငန်းခွင်မှာ အောင်မြင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် လုပ်ကိုလုပ်ရမယ့် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေ့ကျင့်ခန်း (၇) ခုပေးမယ်နော်.. နေ့စဉ်ကြိုးစားပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင် အလေ့အကျင့်တစ်ခုလိုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်.. ကဲ... Ready ဖြစ်ပြီဆို.. စလိုက်ရအောင်..
လေ့ကျင့်ခန်း ၁ - အိပ်ရာစောစောထပါ..
ဒါလေးများ စာရေးပြီးပြောနေရသေးတယ်ဆိုပြီး ထင်ကောင်းထင်နိုင်တယ်နော်.. ဒါပေမဲ့ တစ်ရက်လောက်အိပ်ရာစောစောလောက်ထကြည့်လိုက်ပါ.. မထင်မှတ်ထားလောက်အောင် Productive ဖြစ်တာကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်.. ဆိုပါတော့ ပုံမှန် မနက် ၇ နာရီအိပ်ရာထတတ်တဲ့သူဆိုရင် တစ်ရက်လောက် မနက် ၆း၃၀ လောက်အိပ်ရာထပြီး ရုံးသွားဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ပါ.. မနက် ၇း၄၅ မိနစ်အချိန်က Traffic နဲ့ မနက် ၈ နာရီအချိန်က Traffic ကတော်တော်ကွာတာကို မြင်ရပါလိမ့်မယ်.. ၁၅ မိနစ်လောက်ဆိုပေမယ့် ၇း၄၅ မိနစ်က Traffic က တော်တော်ကိုကားလမ်းရှင်းတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်... ရုံးကိုအချိန်မှန်ရောက်အောင်သွားတာက ကိုယ့်ရဲ့ Time Management Skill ကို သွယ်ဝိုက်သောအားဖြင့်တိုးတက်အောင်လေ့ကျင့်ပေးတာပါ.. ဘာပြီးရင် ဘာလုပ်မယ်.. ဘယ်လောက်အချိန်ယူပြီး ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အသေးစားစီမံခန့်ခွဲမှုအတတ်ပညာကို အလိုလိုတတ်မြောက်လာပါလိမ့်မယ်..အနည်းဆုံးတော့ ရုံးနောက်ကျလို့ Boss ဆီက ပွစိပွစိအပြောတွေမခံရတော့ဘူးပေါ့..
လေ့ကျင့်ခန်း ၂ - မနက်စာစားတဲ့အကျင့်လုပ်ပါ..
ရုံးမသွားခင် မနက်စာစားသွားပါ.. ဗိုက်ဟောင်းလောင်းနဲ့ရုံးသွားတာထက်စာရင် မနက်စာစားပြီးမှရုံးသွားတာက ပိုပြီးစိတ်ကြည်ပြီး သည်းခံနိုင်စွမ်းလည်းပိုပါတယ်.. ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့မနက်စာဖြစ်ရင် ပိုကောင်းတာပေါ့နော်..
လေ့ကျင့်ခန်း ၃ - Email ရှင်းပါ..
ဒါက အရမ်းကိုအရေးကြီးတဲ့အချက်ပါ.. ဒါကတော့ သူပြောမှလား.. လူတိုင်းကတော့ Email စစ်တာပေါ့လို့ ပြန်ပြောစရာရှိတာပေါ့နော်.. ကိုယ့်ဆီကိုဝင်လာတဲ့ Business Email တွေကို တတ်နိုင်သလောက် ချက်ချင်းဖတ်ပါ.. ပြီးရင် Reply ပြန်ပါ.. ကိုယ့်အထက်လူကြီးဆီက Approve ဖြစ်မှ ပို့ရမယ့် Email ဆိုရင်လည်း အထက်လူကြီးကို Report လုပ်ပါ.. ကိုယ်ဖတ်ပြီးတဲ့ Email ကို Archive လုပ်ပါ.. Delete လုပ်ခိုင်းတာ မဟုတ်ဘူးနော်.. Archive လုပ်တယ်ဆိုတာက ကိုယ့်ရဲ့ Email Inbox ကနေဖယ်လိုက်တာပါ.. Archive လုပ်လိုက်တဲ့ Email တွေကို Search Box မှာအလွယ်တကူပြန်ရှာလို့ရပါတယ်.. ဒီလိုပုံမှန် Email စစ်ပြီး ရှင်းလိုက်ရင် ကိုယ်လုပ်စရာကျန်သေးတဲ့အလုပ်တွေဘယ်လောက်ကျန်သေးတယ်ဆိုတာ Email Inbox ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူသိနိုင်ပါတယ်.. Email ကို အလေးထားပြီး Reply လုပ်တတ်တဲ့အကျင့်ကြာင့် တစ်ဖက်ကကိုယ့်ကို Email ပို့တဲ့လူအမြင်မှာလည်း ကိုယ်ဟာအလုပ်တစ်ခုကို Professional ဆန်ဆန်အလုပ်လုပ်တတ်တဲ့လူဆိုပြီး လေးစားပါတယ်..
လေ့ကျင့််ခန်း ၄ - To Do List ပြုလုပ်ပါ..
To Do List ဆိုတာက ကိုယ်လုပ်စရာရှိတဲ့ အလုပ်တွေကိုချရေးထားတဲ့စာရင်းကိုပြောတာပါ.. အင်္ဂါနေ့လုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေကို တနင်္လာနေ့ညနေ ရုံးမပြန်ခင် ကိုယ့် Notebook (ဒါမှမဟုတ်) ကိုယ့် Computer မှာ Sticky Note လေးဖွင့်ပြီးချရေးပါ.. တစ်ခုရှိရင် တစ်ခုချရေးပါ.. မနက်ရုံးရောက်ပြီဆိုရင် ကိုယ်ရေးခဲ့တဲ့ To Do List လေးက ဒီနေ့အတွက် အပြီးလုပ်ရမယ့် Target ပေါ့နော်.. လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ.. ပုံမှန်အလုပ်လုပ်တာထက်စာရင် ဒီလို Goal လေးတွေထားပြီးအလုပ်လုပ်ရတာ အလုပ်ပြီးသွားရင်စိတ်ကျေနပ်မှုတစ်ခုရရှိပြီး ကိုယ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာလည်း ပိုပြီးပျော်ရွှင်လာတာကိုခံစားရပါလိမ့်မယ်.. လေ့ကျင့်ခန်း ၅ - ၂ နာရီခြားတစ်ခါ ၅ မိနစ်စာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ..
ကိုယ်ဟာ Computer ရှေ့မှာထိုင်ပြီး တစ်ကုပ်ကုပ်အလုပ်လုပ်နေရတဲ့သူဆိုရင် အခုချက်ချင်းထိုင်နေရာကထပြီး ရုံးအပြင်ခဏထွက်လိုက်ပါ.. အပြင်ရောက်ပြီဆို ငါးမိနစ်လောက်အသက်ရှုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီး အညောင်းဆန့်လိုက်ပါ.. ဒီလိုလုပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် ဦးနှောက်ထဲကို လတ်ဆတ်တဲ့အောက်စီဂျင်ရောက်သွားပြီး လန်းဆန်းသွားပါလိမ့်မယ်... ပြီးရင် ဟိုကြည့် ဒီကြည့်လျှောက်ကြည့်ပေါ့.. မျက်လုံးအညောင်းလည်းပြေ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာတွေပြောင်းလဲသွားတာရှိတယ်ဆိုတာ သတိထားကြည့်တတ်တဲ့ Observation Skill လည်းတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်နော်..
လေ့ကျင့်ခန်း ၆ - Meeting တစ်ခုပြီးတိုင်း ကိုယ်လုပ်ရမယ့်အပိုင်းကိုသေချာမှတ်သားပါ..
မှတ်သားပြီးရင်တော့ အလုပ်ပြီးအောင်လုပ်ရမှာပေါ့နော်.. ဆိုပါတော့ ဒီနေ့ Meeting မှာ ကိုယ့် Manager က ကိုယ့်ကို Survey တစ်ခုကောက်ခိုင်းတယ်.. Meeting ကို တနင်္လာနေ့မှာလုပ်တယ်.. Manager က သောကြာနေ့အပြီးတင်ရမယ်လို့ Deadline သတ်မှတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်.. ဒါဆိုရင် ကိုယ်က ဒီ Survey ကောက်တဲ့အလုပ်ကို ကြာသပတေးနေ့မနက်ပိုင်းမှာ အကုန်ပြီးအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုပြီး ကိုယ့်ဟာကိုသတ်မှတ်ထားလိုက်ပြီး အလုပ်ပြီးအောင်လုပ်ပါ.. ကိုယ့် Manager ပြောတဲ့ Deadline ထက်ကို တစ်ရက်စောပြီး အလုပ်ပြီးအောင်လုပ်တဲ့အကျင့်ကို မွေးမြူပါ.. ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့အလုပ်က အမှားတွေပါနေတယ်ဆိုရင် Manager အနေနဲ့ ကိုယ့် Project ကို Review လုပ်ဖို့အချိန် ပိုထွက်လာပါတယ်.. Deadline မတိုင်ခင်အလုပ်ပြီး Manager အမြင်မှာလည်း ကိုယ်ဟာကိုယ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်အပေါ်ကိုအလေးထားတယ်ဆိုပြီး မှတ်ချက်ကောင်းရသွားပါလိမ့်မယ်..
လေ့ကျင့်ခန်း ၇ - ပြုံးပါ..
အတတ်နိုင်ဆုံး အလှဆုံးဖြစ်အောင်ပြုံးပါ.. ကိုယ့်တစ်နေ့တာက Stress တွေပိလို့ စိတ်မကြည်မလင်ဖြစ်နေရင်တောင် အတတ်နိုင်ဆုံးပြုံးကြည့်ပါ.. ပြုံးရင်း ပြုံးရင်းနဲ့ စိတ်ကြည်လာပါလိမ့်မယ်...ကိုယ့်မျက်နှာက စူပုပ်ပုပ်ဖြစ်နေတာထက်စာရင် Positive Attitude ဆောင်တဲ့အပြုံးမျက်နှာနဲ့မြင်ရတာက ပိုကောင်းပါတယ်.. ကိုယ်ဟာလောကကြီးကိုအကောင်းမြင်တတ်တဲ့အပြုသဘောရှိတယ်ဆိုရင် လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်း ငြိုငြင်မှုတွေအစား အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့လူက သူများထက်ပိုအေးချမ်းပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းပုံမှန်ထက်ပိုပြီးအလုပ်မြန်မြန်ပြီးပါတယ်..
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုပုံမှန်နေ့စဉ်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်အလုပ်ခွင်မှာသိသာတဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိလာပါလိမ့်မယ်... အားလုံးပဲအလုပ်ခွင်မှာအဆင်ပြေချောမွေ့ပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Life Goal ကိုအမြန်ဆုံးရောက်နိုင်ပါစေ..
ဒီတိုငျးထိုငျနရေုံနဲ့တော့ အလုပျခှငျမှာအောငျမွငျတဲ့လူဖွဈလာမှာမဟုတျပါဘူး.. ထီပေါကျခငျြတယျဆိုရငျ အနညျးဆုံးတော့ ထီထိုးရမှာပေါ့နျော.... ကောငျးမှနျတဲ့အလအေ့ကငျြ့လေးတှကေ Professional ဆနျဆနျအောငျမွငျမှုရရှိလာအာငျပံ့ပိုးပေးနိုငျတယျဆိုတာ လကျခံပါသလား? လကျခံတယျဆိုရငျ လုပျငနျးခှငျမှာ အောငျမွငျသူတဈယောကျဖွဈဖို့အတှကျ လုပျကိုလုပျရမယျ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလကေ့ငျြ့ခနျး (၇) ခုပေးမယျနျော.. နစေ့ဉျကွိုးစားပွီးလုပျမယျဆိုရငျ အလအေ့ကငျြ့တဈခုလိုဖွဈသှားပါလိမျ့မယျ.. ကဲ... Ready ဖွဈပွီဆို.. စလိုကျရအောငျ..
လကေ့ငျြ့ခနျး ၁ - အိပျရာစောစောထပါ..
ဒါလေးမြား စာရေးပွီးပွောနရေသေးတယျဆိုပွီး ထငျကောငျးထငျနိုငျတယျနျော.. ဒါပမေဲ့ တဈရကျလောကျအိပျရာစောစောလောကျထကွညျ့လိုကျပါ.. မထငျမှတျထားလောကျအေmငျ Productive ဖွဈတာကိုမွငျရပါလိမျ့မယျ.. ဆိုပါတော့ ပုံမှနျ မနကျ ရ နာရီအိပျရာထတတျတဲ့သူဆိုရငျ တဈရကျလောကျ မနကျ ၆း၃၀ လောကျအိပျရာထပွီး ရုံးသှားဖို့ပွငျဆငျလိုကျပါ.. မနကျ ရး၄၅ မိနဈအခြိနျက Traffic နဲ့ မနကျ ၈ နာရီအခြိနျက Traffic ကတျောတျောကှာတာကို မွငျရပါလိမျ့မယျ.. ၁၅ မိနဈလောကျဆိုပမေယျ့ ရး၄၅ မိနဈက Traffic က တျောတျောကိုကားလမျးရှငျးတာကို တှရေ့ပါလိမျ့မယျ... ရုံးကိုအခြိနျမှနျရောကျအောငျသှားတာက ကိုယျ့ရဲ့ Time Management Skill ကို သှယျဝိုကျသောအားဖွငျ့တိုးတကျအောငျလကေ့ငျြ့ပေးတာပါ.. ဘာပွီးရငျ ဘာလုပျမယျ.. ဘယျလောကျအခြိနျယူပွီး ဘယျလိုလုပျရမယျဆိုတဲ့ အသေးစားစီမံခနျ့ခှဲမှုအတတျပညာကို အလိုလိုတတျမွောကျလာပါလိမျ့မယျ..အနညျးဆုံးတော့ ရုံးနောကျကလြို့ Boss ဆီက ပှစိပှစိအပွောတှမေခံရတော့ဘူးပေါ့..
လကေ့ငျြ့ခနျး ၂ - မနကျစာစားတဲ့အကငျြ့လုပျပါ..
ရုံးမသှားခငျ မနကျစာစားသှားပါ.. ဗိုကျဟောငျးလောငျးနဲ့ရုံးသှားတာထကျစာရငျ မနကျစာစားပွီးမှရုံးသှားတာက ပိုပွီးစိတျကွညျပွီး သညျးခံနိုငျစှမျးလညျးပိုပါတယျ.. ကနျြးမာရေးနဲ့ညီညှတျတဲ့မနကျစာဖွဈရငျ ပိုကောငျးတာပေါ့နျော..
လကေ့ငျြ့ခနျး ၃ - Email ရှငျးပါ..
ဒါက အရမျးကိုအရေးကွီးတဲ့အခကျြပါ.. ဒါကတော့ သူပွောမှလား.. လူတိုငျးကတော့ Email စဈတာပေါ့လို့ ပွနျပွောစရာရှိတာပေါ့နျော.. ကိုယျ့ဆီကိုဝငျလာတဲ့ Business Email တှကေို တတျနိုငျသလောကျ ခကျြခငျြးဖတျပါ.. ပွီးရငျ Reply ပွနျပါ.. ကိုယျ့အထကျလူကွီးဆီက Approve ဖွဈမှ ပို့ရမယျ့ Email ဆိုရငျလညျး အထကျလူကွီးကို Report လုပျပါ.. ကိုယျဖတျပွီးတဲ့ Email ကို Archive လုပျပါ.. Delete လုပျခိုငျးတာ မဟုတျဘူးနျော.. Archive လုပျတယျဆိုတာက ကိုယျ့ရဲ့ Email Inbox ကနဖေယျလိုကျတာပါ.. Archive လုပျလိုကျတဲ့ Email တှကေို Search Box မှာအလှယျတကူပွနျရှာလို့ရပါတယျ.. ဒီလိုပုံမှနျ Email စဈပွီး ရှငျးလိုကျရငျ ကိုယျလုပျစရာကနျြသေးတဲ့အလုပျတှဘေယျလောကျကနျြသေးတယျဆိုတာ Email Inbox ကိုကွညျ့လိုကျတာနဲ့ လှယျလှယျကူကူသိနိုငျပါတယျ.. Email ကို အလေးထားပွီး Reply လုပျတတျတဲ့အကငျြ့ကွာငျ့ တဈဖကျကကိုယျ့ကို Email ပို့တဲ့လူအမွငျမှာလညျး ကိုယျဟာအလုပျတဈခုကို Professional ဆနျဆနျအလုပျလုပျတတျတဲ့လူဆိုပွီး လေးစားပါတယျ..
လကေ့ငျြ့ခနျး ၄ - To Do List ပွုလုပျပါ..
To Do List ဆိုတာက ကိုယျလုပျစရာရှိတဲ့ အလုပျတှကေိုခရြေးထားတဲ့စာရငျးကိုပွောတာပါ.. အင်ျဂါနလေု့ပျရမယျ့လုပျငနျးတှကေို တနင်ျလာနညေ့နေ ရုံးမပွနျခငျ ကိုယျ့ Notebook (ဒါမှမဟုတျ) ကိုယျ့ Computer မှာ Sticky Note လေးဖှငျ့ပွီးခရြေးပါ.. တဈခုရှိရငျ တဈခုခရြေးပါ.. မနကျရုံးရောကျပွီဆိုရငျ ကိုယျရေးခဲ့တဲ့ To Do List လေးက ဒီနအေ့တှကျ အပွီးလုပျရမယျ့ Target ပေါ့နျော.. လုပျကွညျ့လိုကျပါ.. ပုံမှနျအလုပျလုပျတာထကျစာရငျ ဒီလို Goal လေးတှထေားပွီးအလုပျလုပျရတာ အလုပျပွီးသှားရငျစိတျကနြေပျမှုတဈခုရရှိပွီး ကိုယျလုပျနတေဲ့အလုပျပျေါမှာလညျး ပိုပွီးပြျောရှငျလာတာကိုခံစားရပါလိမျ့မယျ.. လကေ့ငျြ့ခနျး ၅ - ၂ နာရီခွားတဈခါ ၅ မိနဈစာ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျပါ..
ကိုယျဟာ Computer ရှမှေ့ာထိုငျပွီး တဈကုပျကုပျအလုပျလုပျနရေတဲ့သူဆိုရငျ အခုခကျြခငျြးထိုငျနရောကထပွီး ရုံးအပွငျခဏထှကျလိုကျပါ.. အပွငျရောကျပွီဆို ငါးမိနဈလောကျအသကျရှုလကေ့ငျြ့ခနျးလုပျပွီး အညောငျးဆနျ့လိုကျပါ.. ဒီလိုလုပျလိုကျခွငျးအားဖွငျ့ ဦးနှောကျထဲကို လတျဆတျတဲ့အောကျစီဂငျြရောကျသှားပွီး လနျးဆနျးသှားပါလိမျ့မယျ... ပွီးရငျ ဟိုကွညျ့ ဒီကွညျ့လြှောကျကွညျ့ပေါ့.. မကျြလုံးအညောငျးလညျးပွေ ကိုယျ့ပတျဝနျးကငျြမှာဘာတှပွေောငျးလဲသှားတာရှိတယျဆိုတာ သတိထားကွညျ့တတျတဲ့ Observation Skill လညျးတိုးတကျလာပါလိမျ့မယျနျော..
လကေ့ငျြ့ခနျး ၆ - Meeting တဈခုပွီးတိုငျး ကိုယျလုပျရမယျ့အပိုငျးကိုသခြောမှတျသားပါ..
မှတျသားပွီးရငျတော့ အလုပျပွီးအောငျလုပျရမှာပေါ့နျော.. ဆိုပါတော့ ဒီနေ့ Meeting မှာ ကိုယျ့ Manager က ကိုယျ့ကို Survey တဈခုကောကျခိုငျးတယျ.. Meeting ကို တနင်ျလာနမှေ့ာလုပျတယျ.. Manager က သောကွာနအေ့ပွီးတငျရမယျလို့ Deadline သတျမှတျလိုကျတယျပေါ့နျော.. ဒါဆိုရငျ ကိုယျက ဒီ Survey ကောကျတဲ့အလုပျကို ကွာသပတေးနမေ့နကျပိုငျးမှာ အကုနျပွီးအောငျလုပျရမယျဆိုပွီး ကိုယျ့ဟာကိုသတျမှတျထားလိုကျပွီး အလုပျပွီးအောငျလုပျပါ.. ကိုယျ့ Manager ပွောတဲ့ Deadline ထကျကို တဈရကျစောပွီး အလုပျပွီးအောငျလုပျတဲ့အကငျြ့ကို မှေးမွူပါ.. ဒီလိုလုပျခွငျးအားဖွငျ့ ကိုယျလုပျထားတဲ့အလုပျက အမှားတှပေါနတေယျဆိုရငျ Manager အနနေဲ့ ကိုယျ့ Project ကို Review လုပျဖို့အခြိနျ ပိုထှကျလာပါတယျ.. Deadline မတိုငျခငျအလုပျပွီး Manager အမွငျမှာလညျး ကိုယျဟာကိုယျလုပျနတေဲ့အလုပျအပျေါကိုအလေးထားတယျဆိုပွီး မှတျခကျြကောငျးရသှားပါလိမျ့မယျ..
လကေ့ငျြ့ခနျး ရ - ပွုံးပါ..
အတတျနိုငျဆုံး အလှဆုံးဖွဈအောငျပွုံးပါ.. ကိုယျ့တဈနတေ့ာက Stress တှပေိလို့ စိတျမကွညျမလငျဖွဈနရေငျတောငျ အတတျနိုငျဆုံးပွုံးကွညျ့ပါ.. ပွုံးရငျး ပွုံးရငျးနဲ့ စိတျကွညျလာပါလိမျ့မယျ...ကိုယျ့မကျြနှာက စူပုပျပုပျဖွဈနတောထကျစာရငျ Positive Attitude ဆောငျတဲ့အပွုံးမကျြနှာနဲ့မွငျရတာက ပိုကောငျးပါတယျ.. ကိုယျဟာလောကကွီးကိုအကောငျးမွငျတတျတဲ့အပွုသဘောရှိတယျဆိုရငျ လုပျငနျးလုပျတဲ့နရောမှာလညျး ငွိုငွငျမှုတှအေစား အကောငျးမွငျစိတျနဲ့အလုပျလုပျနတေဲ့လူက သူမြားထကျပိုအေးခမျြးပွီး အလုပျလုပျတဲ့နရောမှာလညျးပုံမှနျထကျပိုပွီးအလုပျမွနျမွနျပွီးပါတယျ..
ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးလေးကိုပုံမှနျနစေ့ဉျလုပျပေးမယျဆိုရငျ ကိုယျ့အလုပျခှငျမှာသိသာတဲ့အောငျမွငျမှုတှရေရှိလာပါလိမျ့မယျ... အားလုံးပဲအလုပျခှငျမှာအဆငျပွခြေောမှပွေီ့း ကိုယျလိုခငျြတဲ့ Life Goal ကိုအမွနျဆုံးရောကျနိုငျပါစေ..